Turing, ny orinasan'ny Turing Phone dia manao rakitra amin'ny fatiantoka | Androidsis
Ilay orinasa namorona ny fisie Turing Phone noho ny fatiantoka
Eder Ferreño | | About us
Mety tsy dia mahazatra ny maro ny anaran'i Turing Phone. Izy io dia telefaona nampanantenain'ny orinasa Turing fa haparitaka eny an-tsena amin'ny taona 2015. Izy io dia fitaovana izay namboarina ho finday matanjaka sy azo antoka indrindra hitanay. Saingy, taorian'ny nanambarana an'ity telefaona ity dia nanomboka ny fahatarana teo amin'ny sehatry ny orinasa. Hatramin'ny nanemorana azy io dia nahemotra.
Telo taona lasa izay izay nanambarana an'ity Turing Phone ity, saingy efa betsaka ny mpampiasa efa nanao, afaka manadino momba ilay fitaovana isika. Satria i Turing, ilay orinasa ao ambadik'ity fitaovana ity, dia nitaky ny bankiropitra tany Failandy.
Ny tantaran'ny marika dia liana te hilaza ny kely indrindra hatramin'ny nahaterahany. Hatramin'ny voalohany dia nanambara izy ireo fa tsy afaka hack ny telefaona. Ary koa ny fivarotana azy amin'ny alàlan'ny telefaona izay mialoha be ny fotoany. SAINGY tsy misy na inona na inona nolazain'ny mpamorona azy momba ity Turing Phone ity.
Ankoatra izany, Tsy hita ara-batana velively ny telefaona, satria ny marika dia tsy naneho afa-tsy ny hevitry ny horonan-tsary tamin'ny telefaona. Ka betsaka ny zavatra tsy fantatra hatreto manodidina ity fitaovana ity. Na dia betsaka kokoa aza ny fanondroana voafaritra manokana, tsy naseho mihitsy ny lalao famaranana. Tsy fantatra maro araka ny hitanao.
Ho fanampin'izany, ny haino aman-jery isan-karazany any Failandy dia nilaza fa ny orinasa dia nanana trano fanatobiana trano nohofana izay foana foana nandritra ny taona maro. Ka toa tsy namokatra mihitsy ilay Turing Phone. Fa kosa, nofinofy foana izy io nandritra io fotoana io. Izany rehetra izany dia nahatonga ny fatiantoka ny orinasa.
Hatramin'ny taorian'ny nitaterany ny fatiantoka nihoatra ny antsasaky ny tapitrisa dolara tamin'ny 2017, ny fananan'ny orinasa dia nalaina. Na dia nilaza aza i Steve Chao, tale jeneralin'ny orinasa, fa tsy nivoaka ny orinasa tanteraka izy ireo ary mitady fomba hitondrana ny telefaona an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ilay orinasa namorona ny fisie Turing Phone noho ny fatiantoka
Avereno jerena ny vkworld S8
Simyo dia hamela anao hanangona ireo megabytes tsy voatanisa